Beijing Sinocleansky Technologies Corp.Ukuthengiswa kweShishini:
Ulapha : Ikhaya>Immimiselo & nemiqathango
Wamkelekile ku www.sinocleansky.com. I-SinoCleansky ibonelela ngemveliso kunye neenkonzo kuwe ngokuxhomekeke kwimigaqo, iimeko kunye nomgaqo-nkqubo. Ukungena okanye ukusebenzisa indawo kubonisa ukuba uyavuma imiqathango, iimeko kunye nomgaqo-nkqubo. Nceda uzifunde ngocoselelo.
Ngaphandle kwemvume ebhaliweyo kaSinoCleansky, awunakuphinda uvelise, wenze ikopi, uthengise, uguqule, uguqule, ubonise okanye uxhaphaze le ndawo ngayo nayiphi na injongo yezorhwebo. Awunakho ukusebenzisa naluphi na uphawu lwentengiso, ilog, okanye olunye ulwazi lobunini ngobuchule obukhethekileyo okanye iithegi ngaphandle kokuba kuvunyelwe nguSinoCleansky kwangaphambili. USinoCleansky unelungelo lokuphelisa inkonzo ukuba awuthobeli le Migaqo yoSetyenziso okanye nayiphi na imiQathango yeNkonzo.
Abandwendweli abanakho ukuthumela, ukungenisa okanye ukupapasha naluphi na uphononongo, uluvo, umbuzo kunye nomnye umxholo (a) ongekho mthethweni, ongamanyala, osoyikisayo, ongcolisayo, ohlasela imfihlo, owaphula amalungelo obunini kushicilelo nokuthengiswa komsebenzi wabantu, okanye owenzakalisa abanye abantu indawo; (b) iqulethe okanye ine-virus ye-software, iintshulube, iphulo lezopolitiko, ukucela urhwebo, okanye naluphi na uhlobo "logaxekile". Akuvumelekanga ukuba usebenzise idilesi ye-imeyile engeyiyo, iselfowuni ukuzenza umntu okanye iqumrhu. USinoCleansky unelungelo lokususa okanye lokuhlela umxholo onjalo, kodwa akajongi rhoqo umxholo othunyelweyo.